Daayrektarri Dhaabbata Fayyaa Addunyaa Dr. Tedroos Adihanom ibsa Khamiisa har’aa kenneen, biyyoonni Addunyaa tamsa’ina Vayirasicha ittisuudhaaf hatattamaan tarkaanfii cimaa yoo kan hin fudhanne tahe, gaga’amni hamaan muudatuu mala jechuun akeekkachiise. Dr. Tedroos itti dabaluudhnis biyyi kamiyyuu V
© Usmaan AbdullaxiifAmmaa amma deddeebi’aa Qur’aana itti qara’aa.Qur’aanni gaarii nutti harkisee, hamtuu nurraa ittisa. Mana Qur’aanni keessatti qara’amu Sheyxaanni ni baqata! Dandahee hin dhuunfatu. Waan Qur’aanaan adda fagaate ammoo Sheyxaanaatu itti dhihaata. Qur’aanni qaceelloo haqaati! Dawaa qa
Dhibeen Vaayrasii Koronaa jedhamuun nama irra namatti darbu, hanga ammaa lammiilee Chaayinaa 1300 ol kan qabate yoo tahu, ogeeyyota fayyaa dabalatee namoonni 41 dhibee kanaan du’uu mootummaan biyyattii beeksise. Kanuma hordofuun Vayirasii saffisaan tatamsa’aa jiru kana too’achuuf, mootummaan Chaayin
Akkamitti Hakiima taate(hayyummaa arkatte)? Ja’ani Luqmaan al Hakiim gaafatan.“Dhugaan dubbadha! Amaanaan eega! Maalaaya’nii(waan bu’aa hin qabne) irraahin fagaadha.” Ja’e.•Mee koottaa! Dubbii Luqmaan al Hakiim dubbate tana haa qalbifnu. Dhugaa dubbachuu amala haa godhannu. Dhugaa dubbachuun mallatt
Aangoofi qabeenya Rabbiin nama barbaadeef kenna. Nama barbaade ammoo ni dhoowwata. Madaallii ilma namaatiin olitti kun waan Rabbiin beekkumsaafi dandeytii isaatiin oofu. Asiin dura Rabbiin aangoo nama jaalatu ergamaa isaa Suleymaan ilma Daawuud iif kannee ture. Akksuma ammoo nama jibbu Numrud ilma K
Abdullaahi bin Mas’uud akki je’u: “Ilmi namaa hundi ganama keeysummaatu adunyaaf hirribaa lafaa ka’a, qabeenyi isa bira jirus amaanaadha. Kheeysummaan gala qabdi, amaanan abbaatti deebiti.” Galti keeysummaa du’aan gama aakhiraa hoggaa tahu, amaanaan abbaatti deebitus qabeenya ati walitti qabdu warra
Yeroon yeroo Amiirri Mu’mintootaa Umar Ibnul Khaxxaab bulchaa ture sani. Dubartiin Masrii takka bulchaa Masrii(kan yeroo san Umar bakka bu’ee bulchaa ture) Amr Ibnal Aas iin wal dhabde. ‘Mana kiyya narraa diigee lafa Masjidaa babaldhise’ jattee Umar Ibnal Khaxxaab tti iyyatte.Umar Ibnu Khaxxaab akku
Haqa gosa abaluutirra dhara gosa tiyyaa naaf wayya jedhe namichi doofummaan gammoojjii arabaa amata 1500 dura ija jaamsite tokko. Namni Museeylamaa ja’amu tokko anis Nabiyyii jedhee lafaa kaanaan gosti isaa hundi nabiyyii gosa teenyaa ja’anii wajjiin dhaabbatan. Namicha gosa isaa tokko gaafatan duub
Yeroo ammaa kanatti Sooreyyii irraa yoo dubbatamu wanti sammuu keenya keessa dhufu, dureeyyii Addunyaa akka Bernard Arnault, Bil geet, Warren Bufet, Mark Zukembergii fi kkf dha. Haata’u malee durreessa Addunyaa ardii Afrikaa Mootii Maalii kan jarraa 14ffaa keessa jiraate, qabeenyi isaa dachaa Dureey
Dubbiin Awwaannisaa Qur’aana keessatti ibsamtee?
Yeroo ammaa kana biyya keenya iddoo gara garaatti hoomaan Awwaanisaa oomisha qotee bulaa barbadeesutti jira. Miidhaan balleysee, miidhaa hamaatu oomisha midhaanii irra gahe. Naannicha tohatee iddoo tokko tokkotti humna namaatii ol tahuutu himama.Qur’aanni daawwitii keenya! Haalota keessa jirruufi mu
Dubartiin Hijaaba waliin bareeddi. Faaya kanaan miidheydee ifti. Kabajaafi seenaa gaariis akkasiin arkatti. Tole jattee qooda isiif kenname jaalattee Rabbii isiitis akkasiin gammachiifti. Dhugatti, dubartiin Hijaaba kaayatte qalbii nama hawwatti.Hijaabni dirqama Rabbiin keenya nurra kaaye. Guutumaan
©Usmaan AbdullaxifWiirtuun abdii hegeree, wiirtuun madaallii yaadaatii fi jaataniin taasifamtuu dargaggoota. Ciminni dargaggoota ummata kanaa, cimina Diin kanaati. Diin kana asiin gahuu keessatti dargaggoonni qooda leencaa qaban. Dugugguruu lafee duydaati. Isaantu beekkumsaan karaa Rabbii kana tiyse
Sheekh Muhammad Amiin Abdullaahi Oromticha. Oromticha maqaa je’u anaa miti kan itti ide’e Sheekni Kitaaba Isaa hundarratti (Al-Oromii) Oromticha jechuun if yaama. Bara 1930 (Akka Lakkoofsa faranjii) Haramaayaa Ganda Karrootti dhalate.Sheek Muhammad Amiin Al-Karroo jechuun beekkama, Karroon ganda dha
Umar bin al Khaxxaab Taatee addaa!
Jaafar BeyaanGaafa Sahaabtichi colleen Umar ilmi Khaxxaab duree Muslimootaa ture san, bakka qabeenyi Muslimootaa itti walitti qabamurraa gaalli takka badde. Umar, sadarkaan irra jiru osoo isatti hin dhagahamin gaala badde tana barbaadaaf ka’e. Ganda Madiinaa moggaa keessa osoo barbaacharra jiruu Ali
Umar bin Al-Khaxxaab yoom rafa?
Gaafa tokko Mu’awiyaa binu Khudeeyji biyya Misraa irraa injifannoo Iskandariyaatti argatan itti gabaasuuf Madiinaa dhufe. Hoggaa inni masjida ol seene sa’aan yeroo oorraa tan mataa lafa kaayani. Umar masjidatti arge. Waan dhufeef itti hime. Umar, “hoggaa masjida ol seente maal yaadaati turte?” Jechu
Warra lafaa osoo hin taane, beekkamtiin guddoon warra samii biratti beekkamuudha. Beekkamtiin dhugaan nama fayyadduus sani. Beekkamtii warra lafaa, booddeen wallaalcha. Shuumamni warra lafaa, booddeen shaarama. Warra samii biratti beekkamuudhaaf ammoo Ibaadaa keessattuu Zikrii heddummeessuu qabna.Ha
Torbee lamaan dabre kana keessa paarlaamaa biyyoota garagaraa lamatti mudannoon walfakkaatu mudate. Biyyoonni lamaan kun tokko biyya oollaa keenya Keeniyaa fi biyya Ardii Awrooppaa Niiw ziilaand yoo tahan, muudannoo lamaan jalqabni wal fakkaatuus dhumni garaagarummaa qaba.Maaltu ta’e?Torbaan lama du
Qophii: Abbaas Ibnul IslamWantoota Yeroo ammaa Addunyaa Cinqaa jiru keessaa tokko haphachuu qabeenya uumamaa fi faalama qilleensaati. Sabaaba faalama qilleensaa mootummoonni Addunyaa walgahanii mariyatu, marii isaanii irratti bu’aan isaanii yoo tuqame osoo walii hin galin adda bahu. Kora biyyoota G2
Qophii: Usmaan AbdullaxiifHaqa isaanii eeguu dandeenyaan Shari’aan Islaamaa dhiiraaf hiree takkaa ol fuudhuu lafa keessee jirti. Hedduu fuudhuun karaa Ambiyaati. Karaa warra gaggaarii asiin dura kutaniiti. Ammoo wal qixxeysuu yoo dadhabe fuudha baay’suun sirrii miti. Kaayyoon hedduu fuudhuu karaa g
Dhaabbanni Facebook fayyadamtoonni isaa ergaa barreeffamaa (text message) tokko eega erganii booda yoo kan gaabban tahe, daqiiqaa 10 keessatti balleessuu akka dandahaniif tajaajila “Remove” jedhu kan jalqabe tahuun beekamee jira.Kanaan dura namni tokko Applikeeshiina messenger irrattis tahe gama Fa